Ny fivoaran'ny biomassa any Espana | Fanavaozana maintso
Biomass dia iray amin'ireo loharano azo havaozina miaraka ho avy sy mety ho lehibe kokoa eto amin'ny firenentsika, satria manana fitaovana lehibe hamoronana azy isika: harena ara-pambolena, ala… Saingy mbola lavitra ny ambaratonga ilaina isika ary tsy mitrandraka azy araka izay tratrantsika. Fa maninona Aiza isika?
Soa ihany, ny biomassa dia eo amin'ny faritra misy antsika ary manana ho avy tena mampanantena. Hita taratra izany amin'ny angona avy amin'ny AVEBIOM Biomass Observatory, izay hazavainay etsy ambany.
2 Inona ny Observatoriobiomasa.es?
2.1 Tabilao 1: Fivoaran'ny isan'ny fametrahana biomassa any Espana
2.1.1 etona amin'ny
2.2 Tabilao 2: Fivoaran'ny hery biomassa tombanana any Espana (kW)
2.3 Tabilao 3: Fivoaran'ny angovo namboarina tany Espana (GWh)
Saingy aloha hofaritanay hoe inona no misy an'io angovo azo havaozina io. Ilay antsointsika hoe biomassa dia zavatra biolojika na indostrialy ampiasaina hamokarana angovo azo havaozina nalaina avy amin'ny fampiasana ny dingan'ny fandoroana an'io zavatra io ihany. Raha ny mahazatra, ny biomassa dia miteraka akora avy amin'ny zava-manan'aina na ny taolany sy ny sisa tavela. Azo vita amin'ny ravina, potipoti-kazo, fako, sns.
Manazava izany amin'ny fomba tsotra, raha toa ka olana ho an'ny tantsaha ny fanary ny vokatra sisa tavela, ny fampiasana biomassa dia fomba iray hivoahana, satria ireo fako rehetra ireo dia azo ampiasaina hamokarana herinaratra, eo amin'ny sehatra anatiny na indostrialy. Ny vokatra avy amin'ny biomassa izay ampiasaina amin'ny tanjaky ny angovo dia antsoina hoe biofuel, ary mety ho mafy orina (ho an'ny tanjona ara-tsolika sy elektrika) na ranoka (biofuel). Amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mampiasa angovo avy amin'ny biomassa amin'ny fomba samihafa, manomboka amin'ny zavamaniry hafanana sy famokarana herinaratra ka hatrany amin'ny fampiharana ny fivezivezena sy fitaterana.
Araka ny hita eo amin'ny sary, ny fitomboan'ny lanjan'ny biomassa amin'ity metrika ity dia mitombo avy amin'ny fomba tsy tapaka nandritra ny taona maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny fivoaran'ny biomassa any Espana
Ny fihoaram-pefy amin'ny fasika dia miteraka fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana sy politika